म्याग्दीमा भेटियो अनौठो गुफा ! – Gokarneshwor Online News
म्याग्दीमा भेटियो अनौठो गुफा !
प्रकाशित मिति: २९ माघ २०७४, सोमबार १०:१५ सम्पादक: admin
मंगला गाउँपालिका–१ खानीगाउँमा अचम्मको गुफा फेला परेको छ ।
एउटै गुफाभित्र रहेका धेरै आकर्षक कलाकृतिले कठिन पैदलयात्रा गरेर त्यहाँ पुग्दाको नरमाइलो क्षण बिर्सिएको गुफाको अवलोकन गरेर फर्कनुभएका रञ्जीत रोकाले बताउनुभयो । सदरमुकाम बेनीबजारदेखि करिब तीन घण्टाको पैदलयात्रा पछि पुगिने सो गुफाको संरक्षण गर्नतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि भौतिक पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको अभावमा सो गुफा ओझेलमा परेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
म्यारिज नियमावली (पुनः प्रकाशन)
दुर्गा मूर्तिमा सामान तस्करी !